Maawa mashoma mushure meIOS uye tvOS, iyo beta 2 yemacOS High Sierra 10.13.4 vagadziri inosvika | Ndinobva mac
Maawa mashoma mushure meOS uye tvOS, macOS Yakakwira Sierra 2 yekuvandudza beta 10.13.4 yasvika
Uye zvinoita sekunge eApple yanga yakamirira kuvhurwa kwaElon Musk's #falconheavy, kuvhura iyo macOS Yakakwira Sierra 10.13.4 yechipiri yekuvandudza beta. Mune ino kesi, semu beta yapfuura, zvigadziriso zvebugs zvinowedzerwa uye kugadzikana kweshanduro kunovandudzwa, asi zvakare inoenderera nekuvandudza izvo zvitsva zvinoshandiswa muMessage neICloud, maficha matsva muBooks application uye nekugadzirisa kwayo kutaridzika kunge kune Kushanda kweIOS nekumwe kugadzirisa.
Nhau dziri mune idzi beta 2 dzakanyatsonaka uye dzinoteedzera nzira yeiyo vhezheni yekutanga yakaburitswa neApple mavhiki mashoma apfuura. Mune ino kesi, iyo beta yevashandisi vakanyoreswa mu yeruzhinji beta chirongwa Hatitende kuti zvinotora nguva yakareba kuti tisvike, sezvatinonyora nhau iyi haisati yazviratidza.
Sezvo zvinowanzoitika neshanduro idzi dzevagadziri, iyo beta nyowani yatovepo pawebhusaiti yeApple yakatsaurirwa kwavari uye tinokurudzira kusaiisa kune avo vasiri ivo vanogadzira chaizvo Sezvo isu tichigara tichiti, sezvo iri beta vhezheni, ine zviputi uye izvi zvinogona kuve dambudziko kana tikachiisa pane yedu michina yekushandisa zuva nezuva, chero zvakadaro isu tinogara tine vhezheni beta yevashandisi vakanyoreswa saka usamhanyira kuiisa pane yako Mac munguva pfupi iri kuuya.
Apple inotangisa yechipiri beta vhezheni yakaverengwa pamwe nekuvaka 17E150f uye mairi hatitende kuti akawandisa akawanda maficha akawedzerwa asi kana zvikaonekwa isu tinozozviburitsa munhau imwe chete iyi kana tichagadzira imwe nyowani kana zvichikosha.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » macOS High Sierra » Maawa mashoma mushure meOS uye tvOS, macOS Yakakwira Sierra 2 yekuvandudza beta 10.13.4 yasvika
Apple patents kushandiswa kweApple Penzura paMacs
Yekutanga unboxings uye ongororo yeiyo HomePod inotanga kusvika